हार्‍यो रेखाको ग्ल्यामर – Sourya Online
हार्‍यो रेखाको ग्ल्यामर
सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २९ गते ३:३२ मा प्रकाशित
आफ्नो ग्ल्यामरस छविप्रति निकै सान थियो नायिका रेखा थापालाई । दाबी गर्थिन्- मैले जसरी दर्शकलाई इंगेज गरिरहन सक्ने खुबी भएको अरू को छ र ? हुन पनि यो अवधिमा उनले यति ग्ल्यामर पस्किइन् कि कसैकसैले उनको नामै परिवर्तन गरिदिए- देखा थापा । यो थाहा पाउँदा उनी गर्व मान्थिन् । भन्थिन्- यो मेरो सफलता हो ।
तर अब रेखाको ग्ल्यामर राज तोडिन लागेको चर्चा तिनीहरूले गर्न थालेका छन्, जसले चपली हाइट हेरे । भन्न थाले- नायिका विनीता बरालले रेखाको ग्ल्यामरस छविमाथि धावा बोलेकी छन् । रेखको ग्ल्यामर त अब पुरानो भइसक्यो । जतिसुकै खुले पनि अब नौलो के बाँकी छ र उनमा ?
हुन पनि बजारमा यतिखेर चर्चा छ त विनीताले सो चलचित्रमा दिएको हट लुक्स र त्यत्तिकै तातो दृश्यको । लागेको थियो- यो सुनेपछि रेखाले आफ्नो ग्ल्यामरस छवि बढाउन पक्कै नयाँ-नयाँ रणनीति अपनाउलिन् । अरू कसैबाट यो ताज खोसिन दिने त उनी सोच्दै नसोच्लिन् ।
तर यो के, उनी आफैँ पो विनीताको प्रशंसा गर्न थालिछन् । आफूलाई नम्बर १ को दाबी गर्दै आएकी उनले भनेको सुनियो- नम्बर १ त विनीता पो हुन् । भन्नेहरूको मुख कहाँ थुन्न सकिन्छ र ? यस्तो सुनियो- रेखाले विनीतासँग हार मानिछन् । अब उनी पूर्वग्ल्यामर नायिका हुने भइन् ! यस्तै हो, रेखा म्याम ! उमेर उकालो लाग्दै गइरहँदा आफूले मात्रै सधैँ धान्न कहाँ सकिन्छ र ? नयाँ स्वादको खोजी गरिरहेका दर्शकले नयाँ हिरोइनलाई नै विकल्पका रूपमा पाएपछि तपाईंलाई किन वास्ता गर्थे र ? दर्शकको जातै बैगुनी भन्या, जति गरे नि नहुने !